Semalt Expert Anopa Nhungamiro 10-Kutora E-Commerce Content Marketing
SEO uye kugadzirwa kwehuwandu kunopindirana. Zvisinei, kana rarongwa uye rishandiswa zvakanaka,zvinyorwa zvinogona kuchinja zvikuru kutsvaga kwekuita. Saka, iwe unogona sei kuenzanisa SEO zvido nezvisikwa zvakasikwa?
Dzokera kumitemo iyi ine gumi yegoridhe, inopiwa naArtem Abgarian, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vanobudirira Semalt Digitial Services.
1 - design logo online software. Tsvaga kuti vatengi vanotarisira chii.
Vatengesi vanobudirira vanokurumidza kugamuchira kutsvakurudza kwemusika kuti vaone vatengi vavo 'zvinoda. Imwe nzira yakasununguka uye yakakurumidza yekugadzirisa pfungwa dzehupenyu dzinodiwa nevashambadzi iko kushandiswa kweSeO keyword kutsvakurudza. Kuti uite izvi, wakasarudzakupindura mibvunzo inobvunzwa navanhu inotsvaga injini uye vanobvunzurudza vashandi kune dzimwe pfungwa.
2. Sarudza mifananidzo yehupenyu nekuchenjera.
Kana yakanyorwa pamusoro penyaya inotsvakurudzwa nevanotsvaga muzvizhinji, fomu refuzviripo zvinogona kuva zvakanaka. Uyezve, zvinyorwa izvi zvinofanira kunyorwa mumutauro unowanzoshandiswa nevashanyi. Imwe yenzira dzakanakisisa dzokugadzirisarudzi rwakanakisisa rwehuwandu nderokuteerera kune zvinyorwa zvinonyatsoronga pa Google.
3. Yeuka kuisa zvinyorwa zvinotsanangura.
Kunyange zvazvo injini dzinotsvaga dzine ruzivo runoenderera mberi, dzinoramba dzichidazvinyorwa zvinotsanangurwa kuti zvivabatsire kunzwisisa zvinyorwa, mamiriro, nemifananidzo muvhidhiyo. Nguva dzose rondedzerai infographics uye inosanganisirazvinyorwa zvine zvinyorwa zvinokosha zvaunoda kuita.
4. Usakanganwa zvauri kutengesa.
Gara nehuwandu hwemashoko anowirirana nemasangano uye zvigadzirwa zvauri kupa.Inogona kutaura pfungwa yakajeka. Zvisinei, vanotsvaga vanogara vachifarira nhamba dzisingagumi dzedzidzo, ruzivo, uye zvigadzirwa. Naizvozvo,kudzivisa kubudisa zvinyorwa kunze kweruzivo rwakabatana nechigadzirwa chako.
5. Usanyora kuti utungamirire.
Nyora vateereri. Kunze kwekuti, vataridzi vanoshandisachete mazwi eSeO akafanana nebhizimisi, dongo theshanduro uye ega zvisikwa zvakasiyana-siyana uchishandisa zvinotsanangurwa uye zvakajeka mutauro. Kunyange zvakadaro, achitaura nezvemashoko makuru, iwe wakatsvakurudza pekare uchisarudzapane zviri mukati.
6. Yeuka kutengesa, nounyoro.
Vatengesi veE-commerce vanoda kuti vatengesi vauye panzvimbo yavo pavanenge vachitsvaga uyekunyengerwa nezvinowanikwa zviripo. Zvisinei, pane dzimwe nguva ndiro zvinyorwa zvinowanikwa panzvimbo yezvibereko uye chikamu. Mumamiriro ezvinhu akadaro, mutengesianofanira kuratidzira nzira yekuchengetedza kana kushandisa chimwe chinhu, uye izvi zvinogona kukwezva vashanyi kuti vatenge chigadzirwa.
7. Link e-commerce uye zvakagadzirwa.
Kubatanidza inzira inokosha yevateereri kuti vawane uye vanochera zvigadzirwa. Uyewo,inobatsira kutsvaga injini kuti inzwisise kukosha kwenzvimbo dzakasiyana dzepaiti. Shandisa musoro uye tsoka dzekufamba pakunonganisa mashoko uyezvakagadzirirwa kuitira kuti vashanyi vawane ruzivo uye zvigadzirwa nyore.
8. Gadzira zvinhu zviri pawebsite yako.
Kana uchida kutarisa zvaunofunga, zviise pane imwe nzvimbo yaunoshandisa mukutengesa michinauye kwete microsite. Microsites haisi inobatsira mukutsvaga kwekushanda kwepanyika sezvo iri kunze kwekubatanidza.
9. Funga kubatana kwehuwandu.
Zvinyorwa zviri pawebsite yako hazvisi nguva dzose zvinokwezva vaeni vakarurama. Mumamiriro ezvinhu akadaro,e-commerce vatengesi vanofanira kubatanidza zviri mukati. Izvo zvinoitwa nekupa zvinyorwa kune dzimwe nzvimbo dzinowedzera kupinza zvinhu zviri pawebsite yako.
10. Iva wakangwarira paunenge uchinyora zvinyorwa zviripo.
Kubudisa nyaya kubva kune imwe nzvimbo kunogona kuoneka shanduko inonakidza iwe iwekushaya zvigadziro kuumba zviri mukati. Kunyange zvakadaro, kubva pane imwe maonero eSEO, iyi yezviito inokuvadza mu e-commerce. Inobatsira mumwe munhuzvimwe kuenzanisa nekugadzirisa zvinyorwa zviri pawebsite yako.